Jonga upelo kwiiwebhusayithi > UVielhuber uDavid
Jonga upelo kwiiwebhusayithi11
Upelo oluzenzekelayo kunye nokuhlolwa kwegrama ngoku zizixhobo ezisemgangathweni kwiinkqubo zokulungiswa kwamagama-kodwa ukujonga upelo lwewebhusayithi ngokuzenzekelayo kuye kwaba nzima ukuza kuthi ga ngoku. UGoogle Chrome uthatha inyathelo lokuqala kwelicala kunye nokutshekishwa okuhlanganisiweyo kwimihlaba yokufaka emininzi (textarea). Ngoku kukho inkonzo eyenza oku kwenzeke kuzo zonke iiwebhusayithi.
Inkonzo ye- Duden-Web-Proof ijonga iiwebhusayithi ngokucofa iqhosha ngaphandle kokufaka isoftware eyongezelelweyo- konke okufuneka ukwenze kukufaka i-URL. Ukulandela uvavanyo, umsebenzisi ufumana ingxelo yovavanyo eneenkcukacha kunye neengcebiso zolungiso lwegrama kunye nopelo, ezinokujongwa ngokusebenzisana kwiwebhusayithi.
Isithembiso asisimahla, nangona kunjalo: ixabiso elisisiseko yi- € 5.89 (kubandakanya neVAT) ukuya kuthi ga kumaphepha amahlanu. Abasebenzisi babucala banokuvavanya inkonzo yasimahla: I-URL enye ngosuku inokwenzeka. Inkonzo igcina kuphela isizinda seengcambu ngaphakathi kwaye ngokucacileyo yahlulahlula ngokolu phawu. Kuyenzeka ukuba yonke iwebhusayithi yakho ivavanywe simahla kusetyenziswa iinkonzo ezimfutshane ze-URL ezinje ngebit.ly kunye nezinye ezinje.